Ao India, Tsy Mahazo Fitsaboana Sy Ny Rariny Araka Ny Tokony Ho Izy Ilay Tafavoaka Velona Tamin’ny Herisetra An-tokantrano · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Jona 2017 15:47 GMT
Pikantsary tao amin'ny YouTube Video
Nosoratan'i Srishti Malhotra sy Madhura Chakraborty ity lahatsoratra ity ary nivoaka voalohany tao amin'ny Video Volunteers, fikambanana mediam-piarahamonina iraisampirenena efa nahazo loka miorina ao India. Navoaka eto ny lahatsoratra nasiam-panovana noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Lany tamin'ny taona 2005 ny Lalànan'ny Fiarovana Ny Vehivavy Amin'ny Herisetra An-tokantrano mba hiantohana ny fiarovana ny vehivavy manoloana ny herisetra ao an-tokantrano. Na izany aza, folo taona tatỳ aoriana, tsy mba nahazo rariny ny vehivavy tahaka an'i Rajvati, avy ao an-tanànan'i Singoli ao afovoan'ny fanjakana Indiana Maddhya Pradesh. Tamin'ny Aogositra 2016, nodarohan'ny vadiny tamin'ny famaky ity renim-pianakaviana 22 taona manan-janaka 2 volana ity. Niteraka fahatapahan'ny hozan-tenda ny ratra vokatr'izany, ka tsy afaka miteny izy satria tsy manana fitaovana ara-pitsaboana ampy hitsaboana azy ny hopitalim-panjakana ao akaiky.
“Nilaza tamiko ny zanakovavy, Rajvati, fa nanorisory azy tamin'ny daoty (fanaka miaraka amin-dravehivavy) ny vadiny sy ny rafozany,” nampahatsiahy azy izany ny reniny Chidilal Satnami. “Rehefa niezaka nifandahatra tamin'izy ireo izy, nilaza fa tsy afaka hanome vola i [Chidilal] noho ny fahasembanana ananany, nibedy azy izy ireo ary nangataka azy mba hamaly ny fitakian'izy ireo amin'ny fomba rehetra izay azo atao. “
Nanambady an'i Ramesh Choudhary tamin'ny volana Jona 2015 i Rajvati. Sarotra ho an'ny rain'i Rajvati, manana fahasembanana sy tsy an'asa ny handamina mariazy sy daoty, saingy toa nahavita ihany izy. Fotoana fohy taorian'ny fanambadiana, nangataka daoty betsaka mba hividianana moto ho azy ny vadin'i Rajvati sy ny rafozany. Fantatr'i Rajvati fa tsy ho vita mihitsy izany. Niharatsy ny fifandraisany ara-panambadiana ary nanomboka niampanga azy ho nanitsakitsam-bady tamin'ny rahalahiny, zaodahiny izy tao anatin'izany. Teo anivon'izany, niteraka zazalahy i Rajvati tamin'ny volana Jiona 2016.
Saingy tsy nihatsara mihitsy ny toe-draharaha, ary nanova ny fiainan'i Rajvati mandrakizay ny herisetra. Nihaona tamin'i Rajvati sy ny fianakaviany tamin'ny volana Septambra 1016 ny solontenan'ny fikambanana Video Volunteers, Rekha Bhangre avy ao amin'ny distrikan'i Madhya Pradesh mba hiresaka momba ny zavatra niainany:
Rehefa nahita an'i Rajvati niresaka tamin'ny zaodahiny, novelesin'i Ramesh tamin'ny famaky izy noho ny fahasarotam-piaro. Tapatapaka ny taolany ary nisy voadòna mafy ny hozany, ary tsy afaka namoaka feo intsony izy. Nisy ny fitoriana napetraka tany amin'ny polisy ary voasambotra avy hatrany i Ramesh. Tena goavana ny ratra nahazo an'i Rajvati satria tsy maintsy nentina haingana tany amin'ny hopitalim-panjakana ao Jabalpur, 154 km miala avy eo izy. Satria tsy nety nandoa vola ho an'ny fitsaboana azy i Ramesh vadiny sy ny fianakaviam-badiny, tsy nanan-safidy afa-tsy ny nijanona tany amin'ny hopitalim-panjakana ny fianakavian'i Rajvati, na dia eo aza ny tsy fisian'ny fotodrafitrasa sahaza. Hatramin'ny fanafihana, tsy navelan'ny rafozan'i Rajvati hijery ny zanany lahy i Rajvati.
Indrisy fa tsy maningana ny tantaran'i Rajvati (jereo ny tatitry ny Video Volunteers farany). Tamin'ny taona 2015, fahatelo manana isa ambony indrindra amin'ny trangan-kerisetra an-tokantrano ao India i Madhya Pradesh, araka ny tahirin'ny National Crime Records Bureau (Biraom-pirenena Fandraketana Heloka Bevava). Ankoatra izany, milaza ny lahatahiry fa ny heloka atao amin'ny vehivavy no manana taham-piampangana mahatsiravina latsaky ny 22%. Noderaina noho ny fepetra napetrany mamaha ny olana ny Lalànan'ny Fiarovana ny Vehivavy amin'ny Herisetra ao An-tokantrano, ary ahitana fepetra fialokalofana sy fiantohana ny zo hanana fonenana sy onitra ho an'ny niharam-boina. Kanefa, mbola mitarazoka ny fampiharana izany, araka ny asehoan'ny raharaha Rajvati.
Ohatra, amin'ny raharaha Rajvati, tany amin'ny Hopitaly Jabalpur sy ny Foibem-pikarohana nandritra ny volana maro i Rajvati. Sady lava no mihisatra ny dingana ara-pitsarana, satria mbola tsy nahazo onitra izy. Tsy maintsy nandoa ny lany tamin'ny fitsaboana azy tamin'ny alalan'ny fampindramam-bola ny rainy. Na dia naiditra am-ponja ny ampitson'ny zava-nitranga aza ny vadiny ary mbola any am-ponja, mbola tsy nanomboka ny fitsarana azy. Na dia tsy afa-miteny aza i Rajvat, nanome fanambarana an-tsoratra manamarina izy fa efa nangataka 50.000 ropia tamin'ny ray aman-dreniny ny vadiny mba hividianana môtô. Nandrahona ny hamono azy ny vadiny raha tsy hanome ny vola izy.
Tsy dia nisy ny zavatra be niova hatramin'ny nangalàna ny lahatsary etsy ambony tamin'ny volana Septambra 2016. Na dia navoaka vao haingana ny hopitaly aza i Rajvati ary niverina nody tao an-tanànan'i Singoli, tsy afa-miteny izy ary manana olana rehefa misakafo. Tsy maintsy nankany Jabalpur izy mba hanao fizahàna indroa isan-kerinandro. Nilaza taminy ny manampahefanan'ny hopitaly Jabalpur fa miandry fitaovana ahafahan'izy ireo mandidy ny lohatraokany izy ireo. Ho feno herintaona tsy ho ela ny zanany lahy, saingy mbola tsy miara-mipetraka aminy, fa any an-tranon'ny rafozany. Satria mbola tsy afaka mikarakara azy izy amin'izao fotoana izao noho ny ara-bola sy ara-batana.
Avy amin'ny vondrom-piarahamonina voahilikilika ao India ilay solontenan'ny fikambanana Video Volunteers ary mamokatra lahatsary momba ireo tantara tsy voatatitra. Ireo tantara ireo dia “vaovao ho an'ireo izay miaina izany.” Manome votoaty momba ny zon'olombelona maneran-tany sy ny fanamby ho an'ny fampandrosoana ireo tantara ireo. Raha mihevitra ianao fa afaka manampy an'i Rajvati amin'ny tolona mba hiaina amim-pahamendrehana sy ho sitrana amin'ny fahoriana mahatsiravina mahazo azy, mifandraisa amin'ny Video Volunteers ao amin'ny Info@ videovolunteers (teboka) org.